Fitaovam-piadiana miparitaka ao Toamasina: tratra ny Kalach telo, PA iray sy bala 153 | NewsMada
Fitaovam-piadiana miparitaka ao Toamasina: tratra ny Kalach telo, PA iray sy bala 153
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany Tanambao Faharoa sy ny “Commissariat Central” tao amina tokantrano iray ao Tanambao Verrerie Toamasina parisela 21/27, ny zoma teo ny olona efatra (vehivavy telo sy lehilahy iray ary vao tera-bao iray volana ny vehivavy iray amin’ireo) nahatrarana fitaovam-piadiana mahery vaika.
Araka ny fanazavan’ny kaomisera Rakotovao Jean Christian, basy Kalachnikov telo miaraka amin’ny tranom-bala dimy feno bala miisa 122 mitondra ny marika “OG 81” ary basy PA iray miaraka amin’ny bala miisa 31, marika SF 82 ihany koa. Mbola nahatrarana entana hafa toy ny baffle roa, lecteur roa, fahitalavitra ecran plat iray, ampli roa, telefaonina finday telo, puce-na telefaonina miisa 10 samihafa, sabatra roa, saron-tava ary moto BWS fampiasan’izy ireo rehefa manao ny asa ratsiny. Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisy hatrany, mbola misy jiolahy efatra naman’ireto voasambotra ireto mbola karohin’ny polisy satria ry zalahy ireo no tena mpanao ny fanafihana, raha ny fanazavana voaray hatrany. Noporofoin’ny fanadihadian’ny polisy hatrany fa mitovy marika tamin’ny bala nanaovana fanafihana maromaro tao Toamasina ka nahafatesan’olona hatrany raha tsy hilaza afa-tsy ny nanaovana tifitra variraraka ilay polisy avy niasa ka hamonjy fodiana ao Tanamborozano Toamasina, ny alahady vao maraina ny 6 janoary 2019 lasa teo ity balana Kalachnikov marika “O.G 82” ity, raha ny fanazavan’ny polisy. Ho an’ilay balana PA kosa izay mitondra ny marika S.F 81 dia mitovy laharana tamin’ny nitifirana ilay tovolahy 31 taona tao Tanambao fahadimy, ny 28 janoary 2019 teo izay nahavoaroba ny volany mitentina 12 tapitrisa Ar sy telefaonina finday miisa 17 fampiasa amin’ny fifanakalozana ara-bola ary moto marika Rs iray. Ny vadiny kosa naratra teo amin’ny tanany noho ny tifitra nataon’ireo jiolahy.
Mba hipoitra amin’izay ny marina…
Nifanindran-dalana tamin’ny fahatrarana ireto mpitahiry fitaovam-piadiana mahery vaika ireto, tokantrano iray koa niharan’ny fanafihan-jiolahy miisa efatra nisaron-tava nirongo basy Kalachnikov efatra tao Toamasina ihany. Raha ny angom-baovao voaray, ilay renim-pianakaviana irery no tao an-trano ka norahonan’ireo jiolahy tsy hiantso vonjy izy fa raha tsy izany dia hovonoin’izy ireo. Vokany, voaroban’ireo jiolahy ny vola vahiny 250 euros sy vola malagasy 3 300 000 Ar. Tsy nisy basy nipoaka fa nivoaka moramora ireo jiolahy ary nilaza tamin’ilay renim-pianakaviana tompon-trano hoe “lasa izahay fa ho avy eo indray amin’ny manaraka”.
Mandritra ny fahazoana sy faharavana tambajotran-jiolahy mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika toy izao, miteny hatrany ny mpitandro filaminana hoe tsy ho ela dia hivoaka ny marina momba ny toby nivoahan’ireny basy sy bala tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy ireny. Homena sazy faran’izay henjana ireo mpiray tsikombakomba sy tompon’antoka amin’izany, indrindra ireo mpitandro filaminana miray tendro amin’ny jiolahy. Mba hipoitra amin’izay ny tena marina fa tsy hijanona fisehosehoana fotsiny. Andrasana, araka izany, ny tohin’ity raharaha ity.